လာလီဂါကစားသမားအများစု လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲ
12 Jul 2018 . 3:49 PM
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘောလုံးပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကတော့ အဆုံးသတ်မယ့်အချိန်ကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ အခုဆိုရင် ဗိုလ်လုပွဲ၊ တတိယနေရာလုပွဲတွေသာ ကစားဖို့ ကျန်ရှိတော့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ ၁၉၉၈ ချန်ပီယံဟောင်း ပြင်သစ်နဲ့ ပထမအဆုံးအကြိမ် ဗိုလ်လုပွဲကို တက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားအသင်းတို့ ဆုံတွေ့ကြမှာပါ။ ထူးခြားတာတစ်ခုက နှစ်သင်းစလုံးမှာ လာလီဂါကစားသမား အများစုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီး လာလီဂါထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားအတော်များများက အက်သလက်တီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်အသင်းတွေမှာ ကစားနေကြတာကြောင့် လာလီဂါဟာ ဥရောပဘောလုံးလောကသာမက ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအထိ လွှမ်းမိုးမှုရှိနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။
ပြင်သစ်အသင်းမှာ ရီးယဲလ်နောက်ခံလူ ဗာရန်း Varane ၊ ဘာစီလိုနာနောက်ခံလူ အမ်တီတီ Umtiti ၊ အက်သလက်တီကိုနောက်ခံလူ လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ် Lucas Hernández ၊ အက်သလက်တီကို ကွင်းလယ်ကစားသမားသစ် လူမာ Lemar ၊ ဆီဗီလာ ကွင်းလယ်လူ အန်ဇွန်ဇီ Nzonzi ၊ အက်သလက်တီကို တိုက်စစ်မှူး ဂရစ်ဇ်မန်း Griezmann ၊ ဘာစီလိုနာအသင်းက အူစမန်ဒမ်ဘီလီ Ousmane Dembélé စတဲ့ ကစားသမားတွေ ပါဝင်နေတယ်။
ခရိုအေးရှားအသင်းမှာတော့ အက်သလက်တီကိုနောက်ခံလူ ဗာဆယ်လ်ကို Vrsaljko ၊ ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်လူ ရာကီတစ် Rakitić ၊ ရီးယဲလ်ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကိုဗာချစ် Kovačić ၊ မိုဒရစ် Modrić စတဲ့ကစားသမားတွေ ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းလိုက် ကစားသမားအများဆုံးအဖြစ် အက်သလက်တီကိုအသင်းက (၄)ဦး၊ ရီးယဲလ်နဲ့ဘာစီလိုနာက(၃)ဦး၊ ဆီဗီလာက (၁)ဦးစီ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ..လာမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလားကို အက်သလက်တီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလ်အသင်းက ဘယ်ကစားသမားတွေ ကိုင်မြှောက်ခွင့်ရမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . . .
လာလီဂါကစားသမားအမြားစု လှမျးမိုးထားတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲ
တဈကမ်ဘာလုံးက ဘောလုံးပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နကွေတဲ့ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကတော့ အဆုံးသတျမယျ့အခြိနျကို ရောကျရှိလို့လာပါပွီ။ အခုဆိုရငျ ဗိုလျလုပှဲ၊ တတိယနရောလုပှဲတှသော ကစားဖို့ ကနျြရှိတော့ပွီး ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ ၁၉၉၈ ခနျြပီယံဟောငျး ပွငျသဈနဲ့ ပထမအဆုံးအကွိမျ ဗိုလျလုပှဲကို တကျလှမျးခဲ့တဲ့ ခရိုအေးရှားအသငျးတို့ ဆုံတှကွေ့မှာပါ။ ထူးခွားတာတဈခုက နှဈသငျးစလုံးမှာ လာလီဂါကစားသမား အမြားစုပါဝငျနတောဖွဈပွီး လာလီဂါထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈကွတဲ့ ဒီနှဈသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမားအတျောမြားမြားက အကျသလကျတီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလျအသငျးတှမှာ ကစားနကွေတာကွောငျ့ လာလီဂါဟာ ဥရောပဘောလုံးလောကသာမက ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအထိ လှမျးမိုးမှုရှိနပွေီလို့ ဆိုရမယျ။
ပွငျသဈအသငျးမှာ ရီးယဲလျနောကျခံလူ ဗာရနျး Varane ၊ ဘာစီလိုနာနောကျခံလူ အမျတီတီ Umtiti ၊ အကျသလကျတီကိုနောကျခံလူ လူးကပျဈဟာနနျဒကျဇျ Lucas Hernández ၊ အကျသလကျတီကို ကှငျးလယျကစားသမားသဈ လူမာ Lemar ၊ ဆီဗီလာ ကှငျးလယျလူ အနျဇှနျဇီ Nzonzi ၊ အကျသလကျတီကို တိုကျစဈမှူး ဂရဈဇျမနျး Griezmann ၊ ဘာစီလိုနာအသငျးက အူစမနျဒမျဘီလီ Ousmane Dembélé စတဲ့ ကစားသမားတှေ ပါဝငျနတေယျ။
ခရိုအေးရှားအသငျးမှာတော့ အကျသလကျတီကိုနောကျခံလူ ဗာဆယျလျကို Vrsaljko ၊ ဘာစီလိုနာကှငျးလယျလူ ရာကီတဈ Rakitić ၊ ရီးယဲလျကှငျးလယျလူတှဖွေဈကွတဲ့ ကိုဗာခဈြ Kovačić ၊ မိုဒရဈ Modrić စတဲ့ကစားသမားတှေ ပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။ အသငျးလိုကျ ကစားသမားအမြားဆုံးအဖွဈ အကျသလကျတီကိုအသငျးက (၄)ဦး၊ ရီးယဲလျနဲ့ဘာစီလိုနာက(၃)ဦး၊ ဆီဗီလာက (၁)ဦးစီ ပါဝငျခဲ့ကွတာပါ။ ကဲ ပရိသတျကွီးရေ ..လာမယျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားကို အကျသလကျတီကို၊ ဘာစီလိုနာ၊ ရီးယဲလျအသငျးက ဘယျကစားသမားတှေ ကိုငျမွှောကျခှငျ့ရမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . . .